Amboary ny Ubuntu 18.04 tsy apetrakao | Avy amin'ny Linux
Amboary ny Ubuntu 18.04 tsy apetrakao intsony
Raha mbola mampiasa Ubuntu 17.xx na Ubuntu 16.04 ary te-hanavao ny kinova Ubuntu 18.04 vaovao LTS, avelao aho hiteny aminao izany hain'izy ireo izany nefa tsy mila mamerina mametraka ilay rafitra amin'ny solosain'izy ireo.
Koa satria ny Ubuntu 16.04 dia mbola tohizina hatramin'ny aprily 2021, raha ny Ubuntu 17.10 kosa dia manohana hatramin'ny Jolay 2018, miaraka amin'ny fanavaozana ity kinova vaovao ity dia hanohana hatramin'ny 2023 izahay.
Raha hanao fanavaozana marina ny kinova farany indrindra, fifandraisana Internet fotsiny no ilainao ary tsy misy zavatra hafa rehetra.
Tsotra tokoa ity fizotry ny fanavaozana ity, ny olana tokana mety ho hitany dia ny fotoana ilany azy satria miankina amin'ny fifandraisanao amin'ny Internet ny fampidinana ireo rakitra rehetra hanaovana ilay fanavaozana.
Una toro-hevitra omeko matetika dia izany, na dia tsy mampandefitra ny angon-drakitrao aza ity fanavaozana ity dia tsara foana izany avereno jerena ny fisie anay raha misy fanontaniana. Miaraka amin'ny kopia nomaniny ho solon'izay $ HOME fampirimana anao ary rakitra fisie manan-danja, ny fikirakirana ary ny zavatra heverinao ho zava-dehibe.
1 Ahoana ny fanavaozana ny Ubuntu 18.04?
1.1 Hanatsarana ny Ubuntu 18.04 miaraka amin'ny mpitantana fanavaozana
2 Amboary ny Ubuntu 18.04 LTS avy amin'ny terminal
Ahoana ny fanavaozana ny Ubuntu 18.04?
Manana fomba roa isika Mba hanatsarana ny rafitray amin'ny fomba tsotra, ho an'ireo izay maniry ny hanao zavatra amin'ny sehatr'asa misy sary, dia azontsika atao toy izao manaraka izao.
Alohan'ny hanombohantsika amin'ny fomba fanavaozana tena ilaina tokoa ny manamboatra fanitsiana sasany ao amin'ny ekipanay, noho izany tsy maintsy mankany amin'ny "Rindrambaiko sy fanavaozana" isika izay hotadiavinay avy amin'ny menio fisoratana anarana.
Ary eo am-baravarankely izay nosokafana dia tsy maintsy apetraho ao amin'ny zoro Fanavaozana izahay, anisan'ireo safidy asehony amintsika ao amin'ny "Ampahafantaro ahy ny kinova Ubuntu vaovao" eto andao hifidy ny safidy izay manome antsika toy ny «Misy kinova vaovao"na koa"kinova fanohanana lava".
Manidy ity varotra ity ihany izahay ary afaka manohy ny fanavaozana.
Hanatsarana ny Ubuntu 18.04 miaraka amin'ny mpitantana fanavaozana
Mba hanatanterahana ny fanavaozana amin'ny alàlan'ny fanampian'ny mpamosavy dia ilaina ny fametrahana azy, amin'ny ankapobeny dia tonga amin'ny alàlan'ny default izy io, fa na izany na tsy izany dia azo antoka fa tsy maintsy apetraka fotsiny izy io, afaka tohanan'ny ivon-toeran'ny rindrambaiko Ubuntu na Synaptic izy io, tokony ho tadiavin'izy ireo fotsiny.
Na raha tianao dia azonao atao amin'ny terminal ny manatanteraka ity baiko manaraka ity:
Ankehitriny alohan'ny hanatanterahana ny fanavaozana dia tsara raha mihazakazaka mandidy ireto:
Raha nametraka ireo fonosana farany ianao, mandehana fotsiny ny mpitantana ny vaovao farany miaraka amin'ity baiko manaraka ity:
Hanokatra ny Software Updater sy lHampahafantatra ny fisian'ny Ubuntu 18.04 io, dia tsindrio ny bokotra "fanavaozana".
Aorian'ny segondra vitsy dia hisokatra ny efijery fanamarihana Ubuntu Bionic Beaver.
eto tsy maintsy tsindrio ny Vaovao farany indray mandeha hanohizana ny fizotry ny fanavaozana. Ny fizotran'ny fanavaozana ny fizarana dia hanomboka hanamboatra fantsona lozisialy vaovao ho an'ny Ubuntu 18.04 LTS.
Ary farany, tsindrio ny "Start update" ary hanomboka ny fizotry ny fisintomana sy ny fanavaozana ny rafitra, mila miandry fotsiny ianao mandra-pahavitany raha mangataka anao hamerina ilay rafitra izy.
Amboary ny Ubuntu 18.04 LTS avy amin'ny terminal
Izao no fizotran'ny fanavaozana, mila mandidy baiko vitsivitsy fotsiny isika ary miandry ny fisie rehetra ilaina amin'ny fampidinana ny fanavaozana.
Ka hanombohana ny fanavaozana ny Ubuntu 18.04 LTS tsy maintsy manokatra terminal izahay ary manatanteraka ny baiko fanavaozana ny fonosana:
Mety ho elaela ihany io. Raha mangataka azy ireo ianao hanangana azy ireo dia vitany izany. Vita izao izao eny andao hihazakazaka ny baiko hanavao ny kinova vaovao, ny baiko dia izao:
Raha manatanteraka an'io baiko io dia aseho ity angano manaraka ity:
Azontsika atao ny manampy ireto masontsivana manaraka ireto hanavao ny rafitra:
Mila miandry ny famaranana fotsiny ny fizotrany izy ireo ary hamerina ny solosainany amin'ny farany.
Làlana feno mankany amin'ny lahatsoratra: Avy amin'ny Linux » GNU / Linux » Amboary ny Ubuntu 18.04 tsy apetrakao intsony
Ayekan dia hoy izy:
Salama! Nivoatra tamin'ny Ubuntu 17 ka hatramin'ny 18 aho, ary hitako fa tsy fantatry ny webcam an'ny Note izany .. Fantatrao ve ny fomba famahana azy ..?
Mamaly an'i Ayekan
priverotoinv dia hoy izy:
Azonao atao ve ny manavao avy amin'ny Ubuntu 16.10 mankany Ubuntu 18.04 LTS mivantana, mampihatra ireo baiko terminal ilazalazanao?
Mamaly an'i priverotoinv
felisa dia hoy izy:
Tsy azoko ny fomba hidirana amin'ny terminal
Ahoana no ahafahako manavao ny kinova… ubuntu 16.04 lts ???
Mamaly an'i felisa
Azoko ny hafatra
1 Ity kinova ity (Ubuntu 17.10) dia tsy tohanana.
Misisika aho ary miseho ity hafatra hafa ity
Faha-2 fanatsarana ny 'zesty' ho 'bionic' dia tsy tohanana amin'ity fitaovana ity.
ary tsy azo atao ny manavao
Midika ve izany fa mila mametraka Ubuntu 18.04 amin'ny rangotra aho?
Mamaly an'i dario
Socrate dia hoy izy:
Misaotra betsaka. Ny tutorial-ny fanavaozana ny rafitra fiasako manomboka amin'ny 18.04 ka hatramin'ny 20.04 dia tonga lafatra ho ahy. Nampiasa ny torolàlana aho ary nanao izany avy tao amin'ny terminal. Raha ny amiko dia naharitra efa ho adiny efatra ny fizotrany, saingy mendrika izany satria voatahiry ny rakitra rehetra. Na izany na tsy izany, nasainy notohanana ho fahatsiarovana izy ireo. Misaotra betsaka tamin'izay.
Mamaly an'i Socrates
GSM dia hoy izy:
Mamaly an'i Gsm
Heike Niemann dia hoy izy:
Valiny tamin'i Heike Niemann
Antony fametrahana na fanavaozana ny Ubuntu 18.04
Ampidiro ao amin'ny Ubuntu 18.04 ny fampirimana ao an-tranonao